Tobago Avaratra-Atsinanana, notendren’ny UNESCO ho ‘Tahirin-javaboary sy ny Olombelona’ · Global Voices teny Malagasy
Tanjona ny hiara-monina anaty firindràna ny olombelona sy ny natiora
Voadika ny 08 Novambra 2020 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, 日本語, English
Ireo mpankafy mitety natiora teny amoron'ny Làlana fitetezana ny Ala mando Gilpin Trace ao amin'ny tandavan-tendrombohitra Main Ridge, ny Ala sady Tahirin-javaboary ao Tobago, izay niorina voalohany tany amin'ny taona 1776. Sary an'i Aivar Ruukel tao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Sean McCoon no nanoratra sy namoaka voalohany ity lahatsoratra ity tao amin'ny Cari-Bois News. Dika nokiraina no averina avoaka etoana, tafiditra ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty iarahany amin'ny Global Voices.
Ny fanendrena ny faritra Tobago Avaratra-Atsinanana ho toy ny Tahirin-javaboary sy ny Olombelona (MAB) eo anivon'ny United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) – Sampana misahana ny fanabeazana, ny siansa ary ny kolontsaina ao amin'ny Firenena Mikambana – dia nitondra ho aminà fankalazàna iray teny anivon'ireo mpandresy lahatra hisian'ny fivoarana lovainjafy ao Tobago, izay milaza fa mahazo tombony betsaka avy amin'izany anaram-boninahitra izany ilay nosy.
Io fanavahana io, izay tamin'ny 28 Oktôbra no nambaran‘ny kaomity iraisampirenena mpandrindra ny Tahirin-javaboary sy ny Olombelona, dia mametraka ny faritra Avaratra-Atsinanan'i Tobago ho ao anatin'ny lisitra manerana ny tany ahitàna ireo Tahirin-javaboary miisa 714 ao amin'ny UNESCO. Ireo tahirin-javaboary hafa dia ahitàna ireo toeram-pitsangantsanganana malaza toa an'i Mount Olympus ao Gresy sy Valam-pirenena Komodo ao Indônezia.
Inona no mampiavaka ny tahirin-javaboary iray ao amin'ny UNESCO ?
Ny tahirin-javoaboary dia faritra iray izay nekena noho ny fisian'ny fifangaroan-javaboary tokamiavaka ao aminy, ny tontolo iainana sarobidy sy ny fomba fiaina mitsinjo lavitra ampiharin'ireo olombelona mponina ao aminy. Omen'ny UNESCO ho loka io fanavahana io mba ho fanomezana tosika bebe kokoa ny fifandraisana mirindra misy amin'ny olombelona sy ny natiora. Tratra izany tanjona izany noho ny fampiraisana ny asan'ny olombelona amin'ny fiarovana sy fitahirizana ny fifangaroan-javaboary ary tamin'ny fametrahana fototra siantifika iray ho entina mitantana amin'ny fomba maharitra ireo loharanon-karena voajanahary entin'io fifangaroan-javaboary io.
Ny Tahirin-javaboary ao amin'ny Alan'i Main Ridge ao avaratra-atsinanan'i Tobago dia fantatra betsaka amin'ny maha-tahirinà ala mando trôpikaly tranainy indrindra azy any amin'ny ilabolantany andrefana, nitàna anjara toerana goavana tao amin'ilay faritra notoloran'ny UNESCO ilay fanendrena.
Ity ala mando ity, ao amin'ny Main Ridge ao Tobago — zavatra tsy nataon'olombelona, lavabe, teritery ary somary misavoana miaraka amin'ireo tehezany heverina ho toy ny hazondamosin'ilay nosy – dia mampiseho rafi-piainana tsy fahita firy sy tena mbola tsy voakitika loatra eo anelanelan'ireo nosy ao Karaiba sy ny ranomasimbe.
Ny tahirin-javaboarin'ny UNESCO ao avaratra-atsinanan'i Tobago dia mivelatra amina velarantany 83.488 hektara, ka faritra an-dranomasina ny 68.384 hektara, ary tena feno zava-mananaina tokoa ao anatiny. Misy 1.774 ireo karazana zavamaniry sy biby isankarazany ao amin'ilay tahirin-javaboary, miparitaka aminà toeram-ponenana 19 samihafa. Ifampizaràna amin'ireo olona 1.000 mipetraka ao avaratra-atsinanan'i Tobago ilay faritra, izay miaina ao anatin'ilay tahirin-javaboary ary, amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny fiarovana ilay tahirin-javaboary ny velontenan-dry zareo.
Karazana 41 tsy fahita afa-tsy ao an-toerana no misongadina ao amin'ilay tahirin-javaboary, ary karazany hatramin'ny 83 amin'ireo miaina ao no tafiditra ao anatin'ilay Lisitra Menan'ireo Ahiana ho Lany Tamingana navoakan'ny Fikambanana Erantany ho Fiarovana ny Natiora (IUCN). Ny karazana tena miavaka indrindra ao amin'ilay tahirin-javaboary, hoy ny UNESCO, dia ny Campylopterus Ensipennis, fantatry ny maro amin'ny hoe Tsikiririoka fotsy rambo (White-tailed Sabrewing Hummingbird). Io zavaboary tsy fahita firy sy mampitolagaga io, mampiavaka manokana an'i Tobago, dia efa noheverina fa lany tamingana taorian'ilay Rivodoza nahery vaika “Flora” nandrava ny ankamaroan'ireo toeram-ponenana tao amin'ny ala mandon'i Tobago tamin'ny 1963.
Tsikiririoka fotsy rambo (Campylopterus ensipennis) ao Gilpin Trace, Tahirin-javaobarin'ny Ala mando Main Ridge, Tobago. Sary an'i Steve Garvie ao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Nanomboka teo dia tsy takona afenina ny fiverenan'ny ala mando: ny tahirin-javaboarin'i Tobago amin'izao fotoana izao no midadasika indrindra amin'ny toerana tahaka izany any amin'ireo faritra miteny anglisy ao Karaiba izay ahitàna vondrompiarahamonina miisa 15 — mainga avy any Belle Garden amin'ny atsinanana, ary hatrany Moriah, ampahany avaratra amin'ilay nosy. Ny hany tahirin-javaboary misadrahaka kokoa ao amin'ny faritra dia ny Archipel de la Guadeloupe, ao amin'ny faritra frantsay ampitan-dranomasina.
Fandresena goavana ho an'ny fandrosoana lovainjafy
Ao amin'ny tranonkalany, ny UNESCO dia mamaritra ilay tahirin-javaboary ho toy ny toerana fianarana (fandalinana) momba ny fandrosoana lovainjafy, izay manome “vahaolana avy eo an-toerana ho an'ny fanamby erantany.” Fanendrena midika fandrisihana ny asa fikarohana izay mampiasa fomba firoso mampivady ny natiora sy ny siansa sôsialy io, mba hanatsaràna ny fiveloman'ny olombelona sy hitantànana rafi-piainana voajanahary sy voaara-maso. Isaky ny folo taona, manao tombana ny UNESCO ijereny ny fiasan'ireo tahirin-javaboary sy ny firotsahana an-tsehatr'ireo mponina zanatany.
Feno fanantenana ireo mpiaro tontolo iainana ao Trinidad & Tobago hoe hanome fidirambola ho an'ireo mponina ao an-toerana mba hanamaro rantsana ny asa fihariana io anaram-boninahitra hoe tahirin-javaboary avy amin'ny UNESCO io, ka hitohy haharitra mba hitazonana ho an'ireo taranaka hoavy izany fanendrena izany.
Aljoscha Wothke, tale mpanatanteraka avy amin'ny Environmental Research Institute Charlotteville (ERIC), nanoritsoritra ilay fandaharanasa ho toy ny “fitaovana iray” tokony “horaisina sy hampiasain” ireo Tobagôniàna — midika hoe ny governemanta, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonina sivily dia tokony hiaraka hiasa mba ho fahombiazana no ho azo amin'ilay fanendrena hoe MAB .
Fandraisana anjaran'ny fanjakàna, ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonina sivily
Ancil Dennis, lehiben'ny sekretera ao amin'ny (THA) Antenimiera ao Tobago, dia faly nandray ny vaovao nanendrena ny ao Tobago Aravatra ho tahirin-javaboary ao amin'ny UNESCO, tamin'ny filazana hoe io no porofo fa ambonin'ny zavatra rehetra ny fandrosoana lovainjafy ho an'i Tobago :
Ity fanendrena ho MAB ity no hany fotoana iray tokana azontsika araraotina hanatsaràna ny fitantanana sy ny fiarovana ny lova voajanahary sy ara-kolontsaintsika — faritra roa izay hatrizay no efa tena nanan-danja be ho antsika teto Tobago.
Tao anaty lahatsary iray avy amin'ny THA nankalazàny ilay zavabita, ilay mpihaza trondro amin'ny zanatsipika, Ojani Walker, nilaza fa fandrisihana goavana hisian'ny fanarenana ho amin'ny laoniny ireo morontsiraka, ireo vatohara, ary ny tontolo iainana ilay fanendren'ny UNESCO an'i Tobago, raha ilay masoivoho mpisera dia sy fivahinianana Darlington Chance indray kosa nino fa mety hitondra fahalinana be amin'i Tobago ary koa fidirambola betsaka ho an'ny sehatry ny fizahantany ao amin'lay nosy izany. “Raha tsy arovantsika [ny natiora], tsy hahazo an'izany isika,” hoy izy nanampy teo am-pametrahana ny vinany hisian'ny hoavy maharitra.
Mbola misongadina ihany koa ao anatin'ilay andiana lahatsary i Patricia Turpin, tale lefitra avy amin'ny fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, Environment Tobago. 45 taona no nipetrahany tany amin'ny faritra Avaratr'i Tobago, nantsoiny ireo mpiaramonina aminy mba “hiaraka hiasa amin'ireo izay mitantana io fandaharanasa io” mba hitahirizana ny hakanto sy ny hamaroan'ny kazarazan-javamiaina ao amin'ilay faritra, na dia miatrika ireo vokatry ny olana ateraky ny fiovaovàn'ny toetrandro aza ny nosy.
Ho an'ireo mpiaro tontolo iainana, ny fanendrena ho tahirin-javaboary MAB nataon'ny UNESCO dia tokony ho aingampanahy ho an'ireo olompirenena tsirairay ao Trinidad & Tobago hitodika amin'ny fitahirizana sy fananana hambompom-pirenena.